May 17, 2020 804
कोरोनाको त्रास बढेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । जिल्ला, शहर र टोलमा प्रवेश गर्ने स्थानमा विशेष निगरानी राखिएको छ । तर केही स्थानिमा आफुलाई स्वयंसेवक बताउने, युट्युवर र राजनीतिक दलका युवा कार्यकर्ताह;रुले गै’रकानुनी तरिकाले सर्वसाधारण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खटिएकालाई अनावश्यक दुख दिन थालेका छन् ।
स्वयंसेवीको नाममा ज’थाभा’वी सवारी साधन रोक्ने, ब्यक्तिगत सुरक्षाका सामान’हरुमा पनि निगरानी गर्ने लगायतका अ’वाञ्छित कृयाकलाप सुरु भएको छ ।
त्यस्तै शुक्रवार नागढुंगामा वाग्मती प्रदेश जन’स्वास्थ्य प्रयोग’शालाका निर्देशक नारा;यण कार्की माथि एक युवाले नराम्रो हर्कत गरेका छन् । उनको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले चासो देखाएको छ । सामा’जिक सञ्जा’लमा उनले गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचना गरिएको थियो । प्रहरीले ति ब्यक्तिलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठ’माडौं समेतको टो’लीले उत्तम कार्की नाम गरेका युवकलाई निय न्त्रण मा लिएको जनाएको हो । परिसरका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले त्यसको पुष्टि गरेका छन् । गत शुक्रवार अत्या’वश्यक कामले काठमाडौं आएका कार्की माथि नाग’ढुंगामा केही युवाले गाडी रोकेर त्यस्तो ह’र्कत गरेका थिए।
गाडीको पास मात्र होइन, उनीहरुले कार्कीले गाडीमा बोकेको झोला समेत खोलेर हेरेका थिए। गृह मन्त्रालयले कार्की’को माथिको ह’र्कतलाई गौरकानुनी भनेको छ। प्रहरीले चेकजाँचका लागि रोकेको गाडी जाँच्न स्वयंसेवकका रुपमा खटिएका युवा लागेका थिए ।
स्वयम सेवकको कार्ड लिएर उनीहरु गाडी भित्र के छ भन्ने खोतल्न पुगे। ति युवाले उनको साथमा उनका सह’योगीको ब्याग समेत खोल्न लगाएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
उनले आफ्नो परिचय दिए र काठमाडौं आउनुको कारण खुलाए। उनको घाँटीमा नै परिचयपत्र झु’न्डि’रहेको भएपनि उनीहरुले त्यो हेरेनन् । उनीहरुले सोधखोज मात्र गरेनन्, त्यसको भिडियो नै रेकर्ड गरे जुन अहिले सोसल मिडियामा भाइरल छ।
डाक्टर कार्कीको परिच’यपत्र र कामको जानकारीलाई ‘ल’त्याउँदै उनीहरुले चिकित्सक’को हु’र्मत लिन खोजेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । उनीहरुको निर्देशनबमोजिम सिट बेल्ड खोले, गाडी’बाट उत्रिए। झोलामा भएका सामानहरु देखाउन थाले।
ती युवाहरु घरीघरी तपाईँ स्‍वास्थ्य’कर्मी हुनुहुँदो रहेछ, राम्रो काम गर्नु’भएको छ। हामीले पनि तपाईँहरुका लागि गरेको भन्दैु आफूलाई सुरक्षाकर्मीभन्दा कम नरहे’को बताइरहेका थिए।
उनीहरुले ब्यागको सामान, नागरिकको हिसा’बले चेक गरेको बताइरहेका थिए। कार्कीले व्यागमा कपडा भएको देखाए। तर, उनीहरुले अझै भित्री व्याग पनि खोल्न लगाए। व्याग’मा केही भेटिएन।
डाक्टर कार्कीमाथि भएको ज्या’दतीको दृष्य नजिकै रहेका सुरक्षाकर्मी मु’कदर्शक भएर हेरि’रहेका थिए। भिडियो हेर्नुहोस…
Prevचितवन काण्ड’को यसरी खुल्यो रहस्य, मन्जुलाई ट्रकमा लगेर यस्तोसम्म गरेको रहेछ(भिडियोसहित)
Nextनेपालमा थप एक जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, मृतक’को संख्या २ पुग्यो
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ ! बन्यो नयाँ रकर्ड, आज कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्
तरकारीवालिले भेटिन् श्रीमान अर्जुन अगस्तिलाई, भेट हुने बित्तिकै भयो यस्तो हा`नाहान (भिडियो हेर्नु|स)
रातीको १ बजे पहिरोबाट भागेर बाचेकी ८४ बर्षकि आमा रुदै मिडियामा (भिडियोसहित)